स्याङ्जा Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaperस्याङ्जा Archives • Nepal's Trusted Digital Newspaper
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको मेयरमा एमाले र उपेमयरमा नेपाली कांग्रेस विजयी भएको छ । मेयरमा एमालेका कृष्ण खाँण र उपमेयरमा नेपाली कांग्रेसकी कविता तिवारी गैह्रे विजयी हुनुभएकाे हाे । एमालेका कृष्ण खाँणले नेपाली निवर्तमान मेयरसमेत रहनुभएकाे कांग्रेसका दिलीप प्रताप खाँणलाई २ हजार१ सय ८० मतान्तरले पराजित गर्नुभएकाे हाे । कृष्ण खाँणले १३ हजार ७ सय ७६ […]
स्याङ्गजा । अर्जुनचौपारी गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाश तिवारी र सपना गुरुङ विजयी हुनुभएकाे छ। नेपाली कांग्रेसका तिवारीले आफ्ना प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका चिनुमाया गुरुङ्लाई १ हजार ९ सय ४४ मतान्तरले पछि पार्दै विजयी हुनुभएकाे हाे। तिवारीको ५ हजार २ सय ९१ मत पाउँदा गुरुङले ३ हजार ३ सय ४७ मत प्राप्त गर्नुभएकाे थियाे […]
सुनिता कार्की, स्याङ्गजा । स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा स्याङ्जा फेदीखोला गाउँपालिकामा अध्यक्ष पदमा नेकपा एमाले घनश्याम सुवेदी पुनः निर्वाचित हुनुभएकाे छ । उपाध्यक्षमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार देउकुमारी गुरुङ ‘चिजा’ निर्वाचित हुनुभएकाे छ । घनश्याम सुवेदीले ३ हजार ८ सय ३६ मत ल्याएर विजयी हुनुभएकाे छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी (गठबन्धन) नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार लक्ष्मि प्रसाद […]
वालिङ । स्याङ्जाको भीरकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा नेपाली कांग्रेसका गोविन्दकुमार कर्माचार्य निर्वाचित हनुभएकाे छ । कर्माचार्यले ६ हजार ५ सय ४ मत ल्याई निर्वाचित हुँदा उहाँका निकटतम प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विश्वनाथ अर्यालले ५ हजार ६ सय ६९ मत पाउनुभएकाे थियाे । उपप्रमुखमा नेपाली काँग्रेसकी भगवती रेग्मी अर्यालले ७ हजार १ सय ९७ मतसहित निर्वाचित हुनुभयाे । […]
सुनिता कार्की, स्याङ्जा । स्याङ्जा फेदिखोला गाउँपालिका वडा नं. – २ मा नेकपा एमाले का वडा अध्यक्ष उम्मेदवार अबिलास गुरूङसहितकाे प्यानल बिजय भएकाे छ । फेदिखोला वडा नं. -२ काे मत गणना आइतबार सम्पन्न भएकाे थियाे । नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष उम्मेदवार अबिलास गुरूङले १ हजार ३ सय ७३ मत प्राप्त गर्नुभएकाे छ भने उहाँ […]
स्याङ्जा । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका ४ आरुखर्क मा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ख्यामनारायण पौडेलसहित प्यानल विजयी भएकाे छ । शनिबार राती सम्पन्न मत गणनामा फेदीखोला गाउँपालिका ४ नेपाली कांग्रेस वडा अध्यक्षका उम्मेदवार ख्यामनारायण पौडेलले १ हजार १ सय ७३ मत ल्याउदा ख्यामनारायण पौडेलका प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका उम्मेदवार चेतनदास शर्माले ८ सय ४३ मत ल्याउनुभएकाे […]
सुनिता कार्की, स्याङ्गजा । स्याङ्गजा फेदीखोला पालिका-५ बागे मा नेपाली काँग्रेस को तर्फ बाट वडा अध्यक्ष सहित ३ उम्मेदवार र नेकपा एमाले को तर्फ बाट १ उम्मेदवार बिजयी हुनु भएको छ । स्याङ्गजा फेदीखोला पालिका-५ बागे मा गाउपालिका पालिका नेकपा अध्यक्षका उम्मेदवार घनश्याम सुवेदिले ३ सय ८१ मत ल्याउनुभएकाे छ भने, नेपालि काँग्रेसका अध्यक्षका उम्मेदवार […]
स्याङ्जा । स्याङ्गजा हरिनास १ मा नेपाली काँग्रेसका ईन्द्र बहादुर गुरुङ वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भएको छ । उहाँले ८ सय ०४ मत ल्याउनु भएको छ भने नेकपा एमालेका मिलनराज श्रेष्ठले ५ सय ४२ मत ल्याउनु भएको छ । यो पालिकामा काँग्रेस र माओवादी केन्द्र बिच पूर्ण रुपमा गठबन्ध्न भएको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा गठबन्धनका […]